Ukuphupha nge-Flagellation Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuhlanjululwa kukaKristu mhlawumbi yenye yezona zinto zidumileyo. Nangona ikhankanywe ngokufutshane kwiincwadi zeVangeli, yinto eqhelekileyo kubugcisa bobuKristu. Lo mboniso unokubonakala nasemaphupheni, mhlawumbi kuba umalunga nesi sihloko. Kodwa kunokuthetha ntoni ukuba uyohlwaya wena okanye omnye umntu ephupheni? Ithetha ntoni imeko yokuphupha?
1 Uphawu lwephupha «ukubetha» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukubetha» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukujija» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukubetha» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, uphawu lwephupha "ukubetha" kuhlala kufihla into ecinezelweyo. umxholo wengqondonjengeemvakalelo okanye iimvakalelo. Ukuphupha akukuvumeli oku kungene el mundo ukuvuka, kuba uziva enetyala ngayo. Ngokukodwa xa iphupha eli limohlwaya kwaye limtyakatya ephupheni, iimvakalelo zakhe zokuziva enetyala ziboniswa ngokucacileyo kuye ephupheni. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uqaphele ukuba ngekhe ucinezele yonke iminqweno yakho ekuhambeni kwexesha. Endaweni yoko, kuya kufuneka ufumane indlela elawulwayo yokujongana nazo.
Ukuba iphupha eli libetha omnye umntu ephupheni lakho, kubonisiwe ephupheni lakho ukuba umenza lo mntu ajongane neengxaki zakho kwihlabathi elivukayo. Kuba akunakwenzeka kuye ekuvukeni ubomi ukohlwaya lo mntu, ephupha ephila ngokuthanda kwakhe ephupheni.
Ukuba iphupha litywatyushwa ngomnye umntu ephupheni, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kulitolika njengophawu lomnqweno wephupha lokohlwaywa. Wenze into kwihlabathi eliphaphamayo elingamkelekanga. Inokuba, umzekelo, isenzo sokucinga ngaphandle kwenjongo embi. Ukuba ukubethwa kubonwa ngokuqinisekileyo okanye kubonwa njengokuthandekayo ephupheni, oku kuya kuhlala kubonakala kwi utyekelo lokujonga izinto bonisa ukuphupha.
Uphawu lwephupha «ukubetha» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwembono yengqondo, uphawu lwephupha "ukubetha" lubonisa uloyiko lwephupha lokungakwazi ukumelana neemfuno zomsebenzi. Ukuba iphupha libethwa ngomnye umntu ephupheni, limalunga neemfuno zommandla wakho. Ukuba iphupha lizibetha ephupheni, alinakho ukufezekisa iimfuno zalo zokuzibophelela.
Ngamanye amaxesha, ukubethwa kunokuba nzima njengesohlwayo ephupheni. Ukuziva unetyala yalatha iinyani kwilizwe lokuvuka. Ukuba umntu ubona ukubethwa kukaKristu ephupheni, le meko yephupha inokuqondwa ngokwentetho yengqondo yephupha njengesicelo sokungalahli ukholo kuye. Nokuba udibana nomoya omkhulu oshukumayo kwilizwe lokuvuka, kufuneka ubambelele kuwe kunye neembono zakho.
Uphawu lwephupha «ukujija» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha elithi "flagellation" lubhekisa kwinto yokuba iphupha eli liyakuqonda ukuba liyakulwela. Inqanaba lophuhliso akaphumelelanga ebomini bakhe.